Xildhibanada Digil & Mirifle oo Madaxweyne Garguurte oo hadlaya ka yaacay -Hanjabaad ?
05 May 2013 Waagacusub.com-Sedexdii Galabnimo 4 May 2013 waxaa Villa Somalia ka dhacay Kulan dhexmaray Madaxweyne Hassan Garguurte,Gudoomiye Jawaari iyo dhamaan Xildhibaanada Digil & Mirifle ee Muqdisho ku sugan. Kulanka oo la sheegay inuu Madaxweyne Garguurte dalbaday ayaa ku biloowday caro iyo xasarad kadib markii Mudanayaasha golaha Wakiiladda ee Digil iyo Mirifle ka dalbadeen Madaxweynaha inuu ka laabto xilka qaadistii Taliyaha Boliiska Soomaaliyeed Jeneral Sheekhunaa Maye.
Madaxweynaha Somalia ayaa diiday qodobkaas wuxuuna ka codsaday inay dalbadaan xil kale.
Xildhibaanada Digil iyo Mirifle ayaa u sheegay Madaxweyne Hassan iyo Gudoomiye Jawaari inay dhawaan baarlamaanka horgeeynayaan Mooshin ka dhana Ra''isulwasare Saacid iyo Gudoomiye Jawaari si ay xilka uga tuuraan.
Madaxweyne Hassan Ulusow ayaa isku dayay inuu xasarada dejiyo hasse yeeshee isagoo hadlaya ayey ka yaaceen,mar qura ka wada kaceen fadhiga.
Xildhibaanada Digil iyo Mirifle ayaa Saxaafadda la hadlay waxayna sheegeen in lagu xadgudbay awood qeybsigii Dowladda sidaas darteed ay mooshin ka dhana Xukumadda u gudbinayaan Baarlamaanka si Raísulwasare Saacid iyo Gudoomiye Jawaari loo eryo.
Digil iyo Mirifle waxay ku doodeen in Taliyaha Xooga dalka Jeneral Afqarshe uu yahay Hawiye,Taliyaha Boliiska Mr Saacid uu yahay Daarood,Taliyaha Asluubtana Dir .halka Taliyaha Nabadsugida laga dhigay Bashiir Goobe oo beesha Shanaad u dhashay (Madhibaan)
Si kastaba ha ahaatee,Xildhibaanada D&M waxay bilaabeen qorista mooshin ka dhana Ra''isulwasare Saacid iyo Gudoomiye Jawaari,waxaana la wada sugayaa halka xaajadu ku biyo shubato.